मिर्गौला दिएर मृत्युको मुखबाट बचाएको प्रेमिकाले बिहे गर्न नमानेपछि… – Dainik Sangalo
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०८, २०७८ समय: १५:०१:०७
वृद्ध अवस्थामा दखिने समस्या मध्ये एक हो, बिर्सने बानी । यो समस्या धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ । उमेर बढ्दै जाँदा बिर्सने बानी बढ्दै गएको छ भने त्यसको पछाडी केही काराणहरु पनि हुन सक्छन् । बिर्सने समस्याका कारणहरु के के हुन् ? र, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ रु भन्ने विषयमा मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाको सुझाव यस्तो छ :
डिमेन्सिया रोगको कारण उमेर बढ्दै जाँदा बिर्सने समस्या भएको हुन सक्छ । त्यसको साथै बिसर्ने समस्याको अर्को मुख्य कारण अल्जाइमर पनि हो । उमेर बढ्दै जाँदा हर्मोनल चेन्जको कारण पनि बिर्सने समस्या हुन सक्ने केही सम्भावना रहन्छन् ।
– खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रसस्त मात्रामा पानी पिउने र सन्तुलित भोजनको सेवनले पनि स्मरण्न शक्ति बढाउनमा मद्धत गर्छ ।
– नियमित व्यायाम गरेर वा घरका विभिन्न कामहरू गरेर स्मरण शक्तिलाई यथावत् राख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन तथा दिमागमा रक्षात्मक प्रभाव सिर्जनाका लागि शारीरिक व्यायाम नै सबैभन्दा राम्रो र सजिलो उपाय हो ।
– सकारात्मक सोच राख्ने र नकारात्मक संवेगलाई आफूमा हाबी हुन नदिने । याद राख्ने कुरामा गहिरो रुचि लिएर एकाग्रता भएर पूरै मन लगाएर याद गर्ने बानिले पनि यो समस्या कम भएर जान्छ ।
– मानसिक रूपमा स्वस्थ एवम् फूर्ती अनुभव गर्न दिनमा कम्तीमा ७ देखि ८ घन्टा सुत्नु राम्रो मानिन्छ । स्मरण शक्ति विकासका लागि पर्याप्त मात्रामा निदाउनु पनि जरुरी हुन्छ ।
– वृद्ध अवस्थामा निस्क्रिय जीवनशैलीको कारण पनि वृद्धवृद्धाहरुमा बिसर्ने समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई केही न केही काममा संलग्न गराउनु पर्छ ।
– वृद्धवृद्धा भएपछि परिवारले पनि केही काम नगरी आराम मात्र गरेर बस्नु पर्छ भनेर कोठामा मात्र थुनेर राख्नु हुँदैन । वृद्धवृद्धाहरुले गर्न सक्ने कामहरु गर्न दिनु पर्छ ।
– स्मरण शक्ति बढाउन भनौँ या बिर्सने बानी हटाउन हाँसोको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । धेरै खुसी भयो हाँस्यो भने पनि बिसर्ने समस्या कम हुन्छ ।
Last Updated on: September 24th, 2021 at 3:01 pm